Ukuqubuka ezithweni ezahlukene zomzimba kubonisa izifo ezahlukene. – Noor Health Life
Ukuqubuka ezithweni ezahlukene zomzimba kubonisa izifo ezahlukene.
Inqubo yokuthola ama-pimples emzimbeni wethu ingokwemvelo kodwa uma iqala ukuthola okuningi engxenyeni ethile bese ikhombisa isifo.
Uma ama-pimples ebonakala kule ngxenye, kuwuphawu lokulimala kwezindlala ze-adrenal.
Ukucindezelwa okudlulele emsebenzini kanye nengcindezi kungabangela nokuqubuka kule ngxenye yomzimba.Kuphinde kube wuphawu lokuntenga kwamasosha omzimba ngakho ungakhathazeki wehlise umoya.
U-Noor Health Zindagi uzama ukuthola okungcono kakhulu kuwe kanye nodokotela abakhulu abane-Noor Health Zindagi. Udokotela ohlinzayo Umxhumanisi. Osolwazi. I-Working Noor Health Life isiza abampofu futhi siyakucela ukuthi ubambe iqhaza kulo msebenzi futhi usekele i-Noor Health Life. Funda kabanzi.
Uma ukuqhuma kuvela esifubeni, kusho ukuthi uhlelo lwakho lokugaya alusebenzi kahle futhi kuzodingeka ushintshe indlela odla ngayo.
Imbangela yalokhu kuqubuka ukuntuleka kwamavithamini, lokhu akusho ukuthi kufanele uqale udle izithasiselo zamavithamini kodwa ulungise ukuntuleka kwawo ngokudla.
Isizathu salokhu ukwanda kwezinga likashukela emzimbeni.Ngakho-ke, ungasebenzisi ushukela nesinkwa kakhulu, kodwa neliseka ngemifino nezithelo.
Ngenhla kwemilenze nangaphansi kwe-torso
Uma usebenzisa insipho engahambisani nesikhumba sakho, khona-ke ama-rashes avela kule ndawo, ngakho-ke hlola insipho yakho.Esinye isizathu salokhu kungaba ukutheleleka kwesikhumba.
Ingxenye engenhla nemaphakathi okhalweni
Uma ungalali ngokwanele bese kuvela izinduna kule ndawo, ngokufanayo udla ukudla okunothe ngamakhalori.
Imbangela yalokhu kuqubuka kuyinkinga yokugaya ukudla futhi kukhomba ukuthi awukudli ukudla okunempilo. Izimbangela kanye nokwelashwa kwezinduna.
Isikhathi esiningi asazi ukuthi kungani sithola izinduna ebusweni asikho isizathu esiqondile sokuthi amazinyo akheke kodwa zingaba ziningi izizathu zalokhu ezinye zezimbangela kanye nokwelashwa kwazo zimi kanje asikhulume ngazo ngikutshele imininingwane ethile.
Ukuntuleka kokudla okunomsoco kanye nokudla okuphezulu kwama-carbohydrate ahlanzekile kungabangela izinduna kunoma iyiphi iminyaka.Ukudla okunomsoco kanye nokudla okunenkomba ephansi ye-glycemic kubalulekile.Abacwaningi bathi amazinga aphezulu e-insulini egazini angaholela ekukhiqizweni kwamafutha amaningi. kanye nama-follicle avuthayo.Nawe ungenza ukudla kwakho kunempilo futhi kulinganisele.
Ubuchwepheshe besimanje obubizwa nge-blue light therapy busetshenziswa namuhla ukususa izinduna ebusweni.Le misebe enamandla eluhlaza okwesibhakabhaka ingena esikhunjeni ngamafollicle ibulale amagciwane.Ingadala ububomvu esikhumbeni kodwa kube okwesikhashana,ngakho-ke uma ibhajethi yakho ivuma. , lokhu kwelashwa kungcono kakhulu ekususeni izinduna nokuthola isikhumba esicacile.
Amafutha esihlahla setiye adume kakhulu futhi amnene uma kuqhathaniswa ne-benzoyl peroxide awusizo ekwelapheni zonke izinhlobo zezinduna kuyo yonke iminyaka Uwoyela wesihlahla setiye unempahla yemvelo yokubulala izibulala-magciwane ehlanza izimbotshana ezivaliwe nesikhumba.Aphinde avimbele ukuphuma kwamafutha amaningi ngaphezulu, futhi ngokwemvelo kunciphisa ukuvuvukala kwesikhumba.La mafutha asetshenziswa nasezintweni eziningi zokugcoba, ukugeza ubuso kanye nensipho.
Ngokusho kongoti besikhumba nongoti bezempilo, yehlisa usawoti ekudleni kwakho.INoor Health Life ithi enye yezinto eziyimbangela enkulu yezinduna ukudla kakhulu i-sodium.Nakekela kakhulu uma udla ngaphandle.Kungaba ngcono ukuthi udle kancane kunokudla. I-1500 mg ye-sodium nsuku zonke.
I-Stress sinomthelela omubi ekusebenzeni kwama-hormone.I-stress ayinamthelela oqondile esikhumbeni kodwa noma nini lapho ukhathazekile kuvela izinduna esikhumbeni sakho.Ukwanda okuthinta nezindlala ezikhiqiza uwoyela emzimbeni.Ukuzindla, ukuvocavoca umzimba noma okunye indlela ingasetshenziswa ukunciphisa ingcindezi engadambisa isimo sakho somqondo.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, kubalulekile ukubonisana nodokotela wesikhumba omuhle onezinguquko ezifanele ekudleni kwakho nendlela yokuphila.Izifo ezivela esikhumbeni.
Izimpawu zokuqala zezinye izifo zivela esikhumbeni.
Isikhumba siyisitho esikhulu kunazo zonke emzimbeni womuntu kodwa bewazi ukuthi sibikezela nezifo?
Yebo, izimpawu zokuqala zezinye izifo zivela esikhumbeni.
Kodwa ingabe uyazazi izimpawu eziboniswa isikhumba ngezifo ezihlukahlukene?
Ngokuvamile kunenkolelo yokuthi i-bursitis iwukusabela ekuphuzeni ubisi ngemva kokudla izinhlanzi, kodwa isayensi yezokwelapha iyakuphika lokhu.Eqinisweni, kwenzeka lapho isikhumba sichayeka emvelweni yaso Amangqamuzana e-pigment ayeka ukukhiqiza izinto ezithile ezinombala.Ukubukeka kwamachashazi amhlophe abonakalayo. esikhumbeni empeleni ukuhlaselwa amangqamuzana esikhumba amasosha omzimba, atholakala kumelanin, umbala onemibala esikhumbeni.Kungase futhi kube uphawu lwezifo ezizimele njengesifo se-thyroid.
Amabala omile, alumayo, nabomvu esikhumbeni ngokuvamile avela ngasentanyeni noma ezindololwaneni Yisifo sesikhumba esivamile esingahlasela izingane kanye nabantu abadala, kodwa futhi singaba uphawu lwezinkinga zempilo yengqondo. Ngokocwaningo lwaseMelika, abantu abanokhwantalala noma ingcindezi banamathuba amaningi okuthi bangenwe yilesi sifo kusenesikhathi, kodwa ukwelapha i-dermatitis nakho kuthuthukisa impilo yengqondo.
Ushukela ophezulu wegazi isikhathi eside ungaphazamisa ukujikeleza kwegazi futhi kulimaze imizwa, kuphazamise ikhono lomzimba lokupholisa amanxeba, ikakhulukazi emilenzeni, okungadala isifo sikashukela, esibizwa nangokuthi i-fistula.
Kulesi sifo sesikhumba, ama-peels avela esikhumbeni kanye nokuluma nokuluma, kodwa futhi akhomba izinkinga ezithile zezokwelapha ezingathi sína. Ngokusho kochwepheshe bezokwelapha, abantu abanalesi simo banamathuba angu-58% okuba nesifo senhliziyo futhi bangamaphesenti angu-43 engozini enkulu yokushaywa yisifo sohlangothi. Ongoti bathi i-psoriasis namahlule egazi emithanjeni kudalwa wukuvuvukala kanti le nto ixhumanisa lezi zinto zombili.
Okusanhlamvu okupinki noma umfaniswano
Lesi sifo sidala ukuthi isikhumba sibe bomvu bese kuvela imihuzuko ebomvana, abantu abaningi abayiphathi ngoba bengayiboni iyingozi, kodwa ucwaningo olusha lwathola ukuthi lesi simo sandisa amathuba okuba ne-dementia kubantu besifazane ngo-28%. iminyaka yobudala ingaphezu kweminyaka engama-50 noma engama-60.
Imilenze enesikhumba esomile nesiqhekekile
Lokhu kungase kube uphawu lwezinkinga nge-gland yegilo (ikakhulukazi izindlala eziseduze noqhoqhoqho), ikakhulukazi uma kungenanzuzo ukunakekela umswakama ezinyaweni. Uma kunenkinga endlaleni yegilo, ayikwazi ukukhiqiza amahomoni egilo asebenzela izinga lokugayeka kokudla emzimbeni, umfutho wegazi, ukuthuthukiswa kwemisipha kanye nesimiso sezinzwa. Ngokusho kocwaningo lwezokwelapha, ngenxa yezinkinga ze-Thai Ride, isikhumba siba somile kakhulu, ikakhulukazi isikhumba sezinyawo siqala ukuqhekeka futhi kunenzuzo kuphela ukubona udokotela uma isimo singathuthuki.
Ukujuluka ngokweqile ezandleni kungabangela isifo se-thyroid kanye nokujuluka ngokweqile, lapho izindlala zomjuluko zisebenza kakhulu. Iningi labantu lihlangabezana nale nkinga esithweni esisodwa noma ezimbili zomzimba njengamakhwapha, izintende noma ezinyaweni. Odokotela bangasihlola futhi banqume ukwelashwa.
Izigaxa ezimnyama noma ama-moles
Ngokuvamile, ama-moles amnyama avelele kakhulu noma amaqhubu angaba uphawu lomdlavuza wesikhumba, kuyilapho futhi andisa ingozi yomdlavuza webele, wesinye kanye nomdlavuza wezinso. Ngokusho kochwepheshe, ukuhamba kancane elangeni, ukuhlala umatasa, ukudla okunempilo nokuhlala kude notshwala kubalulekile ukuze ugweme umdlavuza obulalayo onjalo.Ukuze uthole eminye imibuzo nezimpendulo, thintana noNoor Health Life nge-imeyili kanye naku-can. noormedlife@gmail.com